FAQ SOMALI — Túlka
Sababtee ayaanay u jirin wax la turjumaa barnaamijka xataa in kastoo ay jirtay wargelin codsi caawimo ah?
Waa maxay Túlka?
Sidee u shagaysaaTúlka?
Maxaa la sameeyaa xaalada turjumaada af celinta ah ee Túlka?
Luqaddahee turjumaada af celinta ayaa laga heli karaaTúlka?
Wax kharasha ma kugu tegaysaa Túlka?
Sideen ku helaa Aqoonsiga?
Wakhtigee ayaan waydiin karaa caawimada turjumaada afcelinta?
Afcelinka Túlka malagu kansoonaan karaa?
Baahiyee turjumaada afcelinta ah ayay Túlka ku habboontahay?
Goorma ayay Túlka Free anay ahayn xalka saxd ah?
Waxaan dalbaday Aqoonsi waxba ma dhicin
Waxaan dalbaday Aqoonsi laakiin kelmaddii sirta ahayd maan helin
Sababtee ayaanan ku geli karin kaadhkayga aqoonsiga?
Sababtee ayaanan kuhelin caawimada turjumaada af celinta xataa in kastoo aan dalbaday?
Sababtee ayaanan ku helin wargelinaha ku saabsan codsiiyada turjumaada afcelinta ah?
Setinka wargelinta way habbaysantahay, laakiin maan helin wargelin ku saabsan codsiyada turjumaada afcelinta ah
Sababtee ayaanay u jirin codad muddada turjumaad afcelinta?
Sababtee ayaanay kamaradu u muujinayn waxba?
1. WAA MAXAY TÚLKA?
Túlka waa qaab cusub oo lagu helo caawimada turjumaada afcelinta ah. Addoo isticmaalaya barnaamijka Túlka, waxaad la xidhiidhi doontaa dhammaan bulshaddadaya turjubanada oo waxaad heli caawimada turjumaada mar kasta oo aad u baahantahay, si degdeg ah oo fudud.
2. SIDEE U SHAQAYSAA TÚLKA?
Si aad u isticmaasho adeega Túlka, waxaad u baahantahay kooto, barnaamijka telefoonka casriga ah ee ismaarka iyo xogta isku xidhka. Waxaad ka heli kartaa barnaamijka Google Play Store iyo App Store. Ka dib soo dejinta barnaamijka, waxaad ku soo gelaysaa kootadaada, kaas oo aad diyaar u tahay inaad waydiisato caawimada turjumaada marka aad u baahantahay.
Markaad ku codso caawimada turjumaad hal cadaadin oo batanka ah, dhammaan kuwa ku wanaagsan luqadda aad dooratay waxaa loo diraa fariin. Ka ugu soo dheereeya turjubaanada la heli karo ayaa qabta codsiga, fura xidhiidhka oo diyaar u ah inuu turjumo.
3. MAXAA LA SAMEEYAA XAALADA TURJUMAADA AF CELINTA AH EE TÚLKA?
Ka dib marka xidhiidh kala furo, turjubaanada waxay baraan nafahooda iyo kooxaha xaalada turjumaduna waxay baraan naftooda turjubaanka. Kooxahan xaalada turjumada waxay masuul ka yihiin siinta turjubaanka mcluumaadka lama huraanka ah markaas waxay ku wada xidhiidhaan fariimaha dhammaan caqabadaha luqadda, oo xisaabtana ku darsanaayamacnaha guud ee mowduuca iyo kala duwananaashaha faraqa. Fiidyowgu waxa uu ka ciyaaraa door muhiim ah guusha wada xidhiidhka.
4. LUQADDAHEE TURJUMAADA AF CELINTA AYAA LAGA HELI KARAA TÚLKA
Wakhtigan adeega Túlka Free, waxaa jira luqaddaha soo socda: Finnish-Carabi, Finnish-Faarisi, iyo Finnish-Soomali. Waxaanu kordhinaynaa xulashada luqadda sidii mutadawiciin turjubaano ah inay ku soo biiraan bulshaddayada.
Xulashada luqadda Túlka Premium waxaa lagu habboonaysiiyay baahiyaha macmiilka. Xulashada waxaa ku jira dhexda waxyaabaha kale Finish Carabi, Finnish- Farsi, Finnish-Sorani, Finnish- Tigranya.
5. WAX KHARASHA MA KUGU TEGAYSAA TÚLKA?
Túlka Free waa u bilaasha dhammaan isticmaalayaasha gaarka ah oo turjumaanada mutadawaciinta ayaa sameeya adeega.
Túlka Premium waa adeeg lacagta la bixiyo oo waxay ku habboontahay xaaladaha turjumaada aadka loogu dalab badayahay, sidii isku xidhe turjumaada ah iyo xaaladaha adeega macmiilka.
6. SIDEE AYAAN KU HELAY KOOTADA?
Waxaad ka heli kartaa kootada macmiilkabilaash ahaan adeegaTúlka Free boggagaTúlkaaddoo buuxinaya ‘Waxaan doonayaa kooto.
Kootada adeega Túlka Premium waxaa loo gudbin doonaa qaabka lala aqbalo shirkada, bulshadda degmadda ama magaalada.
Turjumaanada Túlka , filka turjumaaada iyo isku xidhaha turjubaanada waxay u helaan kooto adeega la xidhiidha tababarka bilowga ah.
7. WAKHTIGEE AYAAN WAYDIIN KARAA CAAWIMADA TURJUMAADA AFCELINTA AH?
Turjubaanada mutadawica ah eeTúlka Free, waxay turjumaan marka suuragal ahaanshuhu saamaxo. Waxay doonayaan inay ka dhigaan nolosha maalin laha ah ee dadka mid ku dhow iyo bulshadana u fudud, gaar ahaan muddada saacadaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. Turjumaanadayadu sidoo kale waxay leeyihiin jawaabid firfircoon laga bilaab 4 galabnimo ilaa 8 habeenimo. Awood u yeelashada habbaynta caawimada turjumaanada habeenka iyaddoo la adeegsanayo mutadawiciin si la fahmi karo waa yar dhaci kartaa.
Túlka Premium waxay u adeegtaa qaabka lala aqbalo shirkada, bulshadda, magaalada ama degmadda.
8. AFCELINKA TÚLKA MALAGU KALSOONAAN KARAA?
Turjumanada Túlka Free waxaa ka go’an qarsoodiga si waafaqsan anshaxa guud ee turjumaada. Si la xidhiidha turjumaada, waxay isticmaalaan makarafoonada dhegaha oo waxay helaan deegaansiiya dhowr gaar ahaansho oo kufilan qaabka looga baahanyahay xaalada turjumaada. Xaalada turjumaada ma diiwaangeliso Túlka ama turjumaanadu.
TurjumaanadaTúlka Premium waxay u shaqeeyaan si khusayda qarsoodiga iyo anshaxa xirfad yaqaaneedqabashada isku xidhka turjumaaduna sidoo kale waa sameeyaa.
9. NOOCEE BAAHIYAHA TURJUMAADA AH AYAYTÚLKA KU HABBOONTAHAY?
Tulka waa turjumaad fiidyow toos ahoo si wanaasagn waxay ugu habboontahay shaqooyinka turjumaada degdega ah ee 5-15 daqiiqo, laakiin sidoo kale ka dheer 15-60 daqiiqo kuwa ah iyo xataa kuwa socda oo 90 daqiiqo ah.
Túlka Free waxay ku habboontahay xaaladaha maalin kasta oo waxay bixisay caawimo qiime leh mar labbaad wixii wada xidhiidhka u dhexeeya guryaha iyo dugsiga, dukaamada, xafiisyada rasmiga ah iyo marka laga hadlayo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah.
Túlka Premium waa isku xidhaha heerka turjumaada ee baahiyaha turjumaada saraakiisha iyo shirkadaha.
10. GOORMA AYAANAY TÚLKA FREE AHAYN XALKA SAXDA AH
UjeedadaTúlka Free waa in la siiyo caawimo dhammaan xaaladaha maalin kasta. Aragtida ilaalinta sharci ee shakhsiga, waa muhiim in saraakiishu ay habbeeyaan turjumaan isku xidhe ah si uu u caawiyo xaalada dacwada dhegaysiga saamaysa go’aan qaadashada, sida magan galyada, dheefta lacageed iyo arrimaha dembiga.
Turjubaanada Túlka Premium waa turjubaano xidhiidhiye ah, macnaheed yahay inay turjumi karaan xaalada maamulka.
11. WAXAAN DALBADAY KOOTO LAAKIIN WAXBA MA DHICIN
11.1 Ma isku diiwaangelisay sidii isticmaale bogga internatka ee Túlka?
Haddii aanay ahayn: Booqo bogga shabakadda Túlka oo isu diiwaangeli sidii isticmaale (www.tulka.com).
FIIRO! Xusuuso inaad isku diiwaangeliso lambarkaaga telefoonka ee shaqeeya, tusaale 0451237777; ha ku darin furaha wadanka.
11.2 Waa inaad ku aragtaa wargelinta hoos ka dib diiwaangelinta:
Haddii aad is diiwaangeliso: Arag su’aasha11.3
11.3 Ma heshay fariintaadii qoraalka ahayd ee koowaad (‘Waad ku mahadsantahay is diiwaangelintaa’)?
Haddii aanay ahayn: Waxaad ka diiwaangashantahay adeeg;, diiwaan geli faahfaahinta xidhiidhka saxda ah.
Haddii haa: Arag su’aasha11.4
11.4 Ma heshay fariin kale oo qoraal ah oo ka kooban kelmadda sirta ah?
Haddii aanay ahayn: Eeg tilmaamaha su’aasha 12.
Haddii haa: Hadda waxaad u diyaartahay isticmaalka barnaamijka Túlka.
12. WAXAAN DALBADAY KOOTO LAAKIIN MAAN HELIN KELMADDA SIRTA AH
12.1 Ma isku diiwaangelisay sidii isticmaale bogga internatka ee Túlka?
Haddii aad isku diiwaangelisay: Arag su’aasha12.2
12.2 Ma heshay fariintii qoraalka ahayd ee u horaysay? Ma heshay wax fariin ah?
Haddii aanay ahayn: Raac tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1. Fur barnaamijka Túlka.
Tallaabada 2. Riix ‘ Ma heshay kelmaddaada sirta ah?’.
Tallaabada 3. Geli lambarkaaga telefoonka.
→ Nidaamka waxa uu hadda kuu soo diri doonaa telefoonkaaga fariin qoraal ah oo ka kooban kelmadda sirta.
13. SABABTEE AYAAN U GELI KARI WAAYAY MACLUUMAADKA KOOTADAYDA?
13.1 Ma isku diiwaangelisay sidii isticmaale bogga internatka eeTúlka?
Haddii haa: Arag su’aasha 13.2
13.2. Ma ku soo gashay lambarkaaga telefoonka oo uu ka maqanyahay furaha wadanku?
Haddii aanay ahayn: Ku soo gal lambarkaaga telefoonka oo uu ka maqanyahay furaha wadanku. → E.g. 0501238989
Haddii haa: Kala xidhiidh Facebook adeega macmilka Túlka.
14. SABABTEE AYAANAN KU HELIN CAAWIMADA TURJUMAADA AF CELINTA AH XATAA IN KASTOO AAN DALBADAY?
14.1 Ma sugtay 1-2 daqiiqo jawaab?
Haddii aanay ahayn: Isku day sugida wakhti ka yar dheer marka xigta. Xidhiidhka internatka iyo shabakada oo tan macnaheedu waxa uu noqon karaa in codsigaaga uu qaadanayo wakhti yar inuu gaadho turjubaanada.
Haddii haa: Nasiib darro, waxaana nugu yar turjubaanada hadda oo turjubaanadayada waxay had iyo jeer turjumaan marka ay awood u leeyihiin inay sidaas sameeyaan. Waanu kaa raali gelinaynaa oo rajo wanaag waxaanu kuu heli doonaa caawimada codsigaaga sida suuragalka ah ee ugu dhakhsaha badan.
15. SABABTEE AYAANAN U HELIN WARGELINTA KU SAABSAN CODSIYADA TURJAADA?
15.1 Ma soo gashay barnaamijkan?
Haddii aanay ahayn: Ku soo gal macluumaadkaaga kootada oo ka eeg setinka in wargelintu ay daarrantahay.
Haddii haa: Arag su’aasha 15.2
15.2. Ma ka hubisay setinka in wargelintu ay daarran tahay?
MOODEELADA TELEFOONKA ANDOROYDHKA:
Tallaabada 1. Tag setinka telefoonka
Tallaabada 2. Fur barnaamijka’.
Tallaabada 3. Hel barnaamijka Túlka (net.heiiapp.heii.app).
Tallaabada 4. Fur Wargelinta’.
→ Haddiii aad batanada ‘Xanib dhammaan’ amaU tus Aamusni’ la daaray, markaa ma heli doontid wargelin.
★FIIRO! Moodeelka Andaroydhka LG Nexus 5X waxaa loo isticmaalaa sawirada. Muuqa setinka iyo qaabka u dhexeeya shaashahadu way kala duwanaan karaan qalabyada Andaroydhka.
★FIIRO! Haddii aad heli kari waydo barnaamijka Túlka, waxay ku hoos jiri kartaa magacyadanet.heiiapp.heii.app.
MOODEELADA TELEFOONKA IOS:
Tallaabada 1. Tag setinka telefoonka.
Tallaabada 2. Fur barnaamijka Túlka.
Tallaabada 3. Riix Wargelinta’.
Tallaabada 4. Hubi in dhammaan qaybahu ay daarran yihiin ( sida ka muuqata sawirka saddexaad).
→ Haddii ‘Xanib dhammaan” ay daarantahay, ma heli doontid wax wargelin ah.
★FIIRO! Moodeelka iPhone 6S waxaa loo isticmaalaa sawirada. Muuqa setinka iyo qaabka u dhexeeya shaashahadu way kala duwanaan karaan qalabyada iOS.
Haddii haa: Arag su’aasha Su’aasha 16.
16. SETINKA WARGELINTA WAY HABBAYSANTAHAY, LAAKIIN WELI MAAN HELI WARGELINTA KU SAABSAN CODSIYADA TURJUMAADA.
16.1 Ma soo gashay barnaamijkan Túlka?
Haddii aanay ahayn: Codsiyada turjumaada ma yimaadaan haddii aanad barnaamijka ku jirin.
Haddii haa: Arag su’aasha 16.2
16.2 Miyaad xogtaada moobilk/Wi-Fi daartay?
Haddii aanay ahayn: Codsiyada turjumaada ma iman doonaa haddii aanu jirin internat. Barnaamijka Túlka waxa keliya oo uu ku shaqeeyaa xidhiidhka internatka.
Haddii haa: Arag tallaabooyinka hoose.
16.3 Hubi inaanad gaynin barnaamijka Túlka qaabka kaydinta tamarta.
Tallaabada 1. Fur barnaamijka maamulka Ismaarka.
Tallaabada 2. Dooro ‘Baytariga’.
Tallaabada 3. Dooro ‘Further information’.
Tallaabada 4. Hadda waxaad ku jirtaa barnaamijka kordhinta xawaaraha, meeshaas oo ay ku jiraan dhowr barnaamij → Dooro barnaamijka Túlka
Tallaabada 5. Aykon yar iyo saddex ikhtiyaar ayaa ka soo baxaya shaashada → Dooro Disabled’.
Tallaabada 6. Markaad dhammaan tallaabooyinkan marto, ka hubi liista sheega ‘Disabled’ barnaamijka Túlka.
★FIIRO! Moodeelka Andaroydhka Samsung S6 waxaa loo isticmaalaa sawirada. Muuqa setinka iyo qaabka u dhexeeya shaashahadu way kala duwanaan karaan qalabyada Andaroydhka.
Tallaabada 3. Batanka ;Low power mode’ waa in la xidhaa.
17. SABABTEE AYAANAY U JIRIN CODAD MUDDADA TURJUMAADA AF CELINTA?
17.1 Ma daartay maykarafoonkaaga?
Haddii aanay ahayn: Arag tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 3. Riix barnaamijka Túlka (net.heiiapp.heii.app).
Tallaabada 4. Hubi qaybta ‘Oggolaanshaha’
→ Batanka maykarofoonka waa in la daaraa. Qaabkan, waxaad ku siisay barnaamijka oggolaansho uu ku gudbiyo codka.
Tallaabada 2. Riix barnaamijka Túlka.
Tallaabada 3. Hubi in maykarofoonka uu daaran yahay ( sida ka muuqata sawirka).
Haddii haa: Kala xidhiidha turjumaankaTúlka ama adeeg macmiilka Facebook
18. SABABTEE AYAANU FIIDYOWGU JOOGTADA AH U MUUJIN WAXBA?
18.1 Ma siisay kamarada oggolaansho?
→ Batanka kamarada waa in la daaraa. Qaabkan, waxaad ku siisay barnaamijka oggolaansho uu ku gudbiyo sawirada fiidyaha.
Tallaabada 3. Hubi in kamaradu daaran tahay ( sida ka muuqata sawirka).
19. SABABTEE AYAANAY U JIRIN WAX LA TURJUMAA BARNAAMIJKA XATAA IN KASTOO AY JIRTAY WARGELIN CODSI CAAWIMO AH
→ Qof kale ayaa awood u yeeshay inuu ka jawaabo codsiga turjumaanka adiga ka hor.
Ku noqo liiska tusmadda